Pfungwa dzekunyora bhuku, zvese zvaunoda kuti uzive | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Mabhuku, Novela, Nhetembo
Pfungwa dzekunyora bhuku.
Parizvino, iyo internet inopa yakawanda huwandu hweruzivo rwakanangana nemazano ekunyora bhuku Mupfungwa iyi, chekutanga chinofanira kutenderedzwa nemunyori chiri pazvinangwa zvake uye / kana zvinangwa. Icho chikonzero chiri nyore: iko kunyora kunoshanda kuratidza chinzvimbo chemunyori zvine chekuita nekunzwa kwemukati kana kwekubatana, pamwe nechimiro chekuparadzira ruzivo.
Chii chinobva kurudziro? Ndechipi chinangwa: kuvaraidza, kuzivisa, kuburitsa fungidziro yenyika, kuburitsa pfungwa yekuona…? Inosanganisira, kukurudzira kwekutengeserana kunogona zvakare kuve kwakasimba kwazvo chinangwa kana uchigadzirira bhuku. Chero zvazvingaitika, kana munyori aburitsa izvo zvisingazivikanwe, anogona kupedzisa matanho anodiwa.
1 Tsanangura chinangwa
2 Mazano ekunyora bhuku risingabvumirwe
2.1 Chii chinonzi semi-fiction?
3 Kurudziro yekunyora bhuku renhetembo kana muunganidzwa wenhetembo
3.1 Ziva chimiro
3.2 Verenga, pinza mukati
3.2.1 Nzwisisa kushandiswa kwezviwanikwa
3.3 Dhizaini muunganidzwa wenhetembo
4 Kurudziro yekunyora bhuku rekufungidzira
Kana munyori ayera chinangwa chake - kazhinji - zviri nyore kwaari kuti ape meseji yake. Panguva imwe, kurudziro yemunyori inoshanda segwara rekusarudza imwe mhando kana maitiro. Zvino, bhuku haridi kuti riitwe pigeonholed mukati meimwe runyorwa runyorwa.
Semuenzaniso: inoverengeka inogona kuve yesainzi yekufungidzira uye, panguva imwe chete, ichipa yavo yega nhoroondo yemutikitivha kana zvakavanzika zvirongwa. Kunyangwe, Yakakosha kurudziro ndeyekuremekedza izvo zvakasarudzika zvemhando yega yega zvinyorwa. Naizvozvo, kana uchibatanidza marudzi akati wandei uye / kana zvitaera, zvakakosha kuti zvisawirirane, kuti zvirege kupokana kana kusapindirana.
Mazano ekunyora bhuku risingabvumirwe
Iyo isiri-ngano nhoroondo inoreva hwaro muzvinhu zvechokwadi. Iyi ficha inosanganisira izvo chokwadi, ruzivo, zviitiko uye mavara. Nekudaro, kana munyori akaisa rondedzero - kunyangwe ichiratidzika senge isingakoshi - iyo yaanoziva seyenhema, inogona kududzirwa sechiito chekusatendeseka.
Naizvozvo, iyi genre inoenderana nezvinyorwa zvese zvakagadzirirwa kufambisa ruzivo. Ndokunge, zvinyorwa zvesainzi, zvemukati mezvidzidzo, emanongedzo, ezvinyorwa zvezvakaitika uye zvinyorwa zvehunyanzvi. Iko kunowanikwa zvinyorwa kunofanirwa kuve kwechokwadi uye neruzivo runogona kudzokororwa.
Chii chinonzi semi-fiction?
Kana munyori akashandisa shanduko diki kune zviitiko zvechiitiko kana chokwadi chesainzi, zvinyorwa zvacho hazvichisiri zvechinyorwa. Kunyangwe izvi zvigadziriso zvidiki zvichitambirwa, zvinomiririra shanduko - pamwe neyakaipisisa tsika - kubata izvo zvirimo sekunge zvakavimbika. Panguva ino, chaicho chinhu kusimbisa kuti iri semi-fikisi chinyorwa.
Kurudziro yekunyora bhuku renhetembo kana muunganidzwa wenhetembo
Kurudziro yekunyora muunganidzwa wenhetembo.
Nhetembo dzeClassical dzinowanzo tsanangurwa senge dzakatsanangurwa muzvikamu, zvinodzorwa nematanho ematanho uye neimwe nhetembo. Nekudaro, idzi nhetembo dzine huwandu hwakajeka hwemashiripiti, dzakapihwa kuwirirana uye mimhanzi. Zvisinei, zvinokwanisika kunyora nhetembo yeprozi kana kusanganisa zvitaera zvese (Ndechipi chinhu chinozivikanwa chevanyori vadiki vemberi-garde).
Nekudaro, kumunyori - kunyanya kana achangotanga mudetembo - zvinobatsira kuti uzive aya akasiyana masitayera. Nenzira iyi iwe unogona kusarudza kuti ndeipi fomu yekuumbwa inonyatsokodzera kunzwa kana pfungwa iwe yaunoda kuratidza. Zvakaenzana, kusarudza chimiro chiri chikamu cheyakajeka nzira yekugadzira, nekudaro, haifanire kunge iri nhanho yekutanga.
Verenga, pinza mukati
Kuverengwa kwenhetembo kunobvumidza kuziva pfungwa uye zviwanikwa zvinoshandiswa nevamwe vadetembi. Chokwadi, chinhu chinopa zano zvakanyanya kuita kuverenga kwakadzika, kufunga, uye kunobva pamoyo, "kutsenga" chirevo chimwe nechimwe. Kana uchibata nemanzwiro, nhetembo dzinogara dzichingova chirevo chekuzviisa pasi, asi manzwiro (rudo, kurwadziwa, kushuva, chishuwo ...) zvakajairika
Muchiitiko ichi, mubvunzo usingadzivisike unomuka, maitiro ekuzvitsauranisa iwe kubva kune vamwe vadetembi kana chinangwa chiri chekutaura manzwiro akafanana? Nzira yekuita sei chokwadi? Mhinduro idzi dzine chekuita nekutsungirira uye nehunyanzvi. Mune mamwe mazwi, inzira yekunyora nekunyora zvakare nechinangwa chekugadzirisa mitsara.
Nzwisisa kushandiswa kwezviwanikwa
Mukuumbwa kwenhetembo, hunyanzvi hwahwo pachahwo hunowanzo shatisa kana munyori asingashandisi zviwanikwa nenzira inokasika. Sezvo madimikira, anaphoras uye zvinyorwa zvese zvinogona kushandura zvakanyanya kana kusimbisa pfungwa yemutsara. Kuburikidza navo, nyanduri anowana kugona kushandura kurudziro yake kuita kutaura kwakashongedzwa.
Neichi chikonzero - zvakakosha kuomerera pane nyaya - kune vadetembi zvakakosha kuti uverenge vatenzi vakuru venhetembo. Nenzira iyi, vezvakaitika kare uye nezvitaera zvakasiyana se Shakespeare naRafael Cadenas, semuenzaniso, vanova vadzidzisi vakanakisa.
Dhizaini muunganidzwa wenhetembo
Mazuva ano, zviri nyore kuwana nhetembo dhizaini pa internet. Sei danho iri rakakosha? Zvakanaka lKurongeka kwenhetembo muunganidzwa wenhetembo kunovabvumidza kuti vapihwe zvakateerana zvinoenderana nechinangwa chemunyori. Nechikonzero ichi, nyanduri anofanira kuona kuti oisa here kana kwete zvinhu zvakaita se:
Kufanirwa. Zvichida, musoro wacho unofanirwa kuve unokwezva uye unoenderana nezviri muunganidzwa wenhetembo. Mushure mezvose, izita iro vamwe vanhu vanozoziva iro basa.
Subtitles (zita renhetembo imwe neimwe) uye / kana nhetembo dzakaverengwa. Nenzira imwecheteyo, muunganidzwa wenhetembo unogona kukamurwa muzvikamu zvinoronga nhetembo dzinoverengeka.
Aesthetics (nhamba yemakoramu pane peji uye nzvimbo pakati pezvikamu).
Kurudziro yekunyora bhuku rekufungidzira
Fungidziro yakazvimisikidza seyakanyanya kufarirwa zvinyorwa zvemhando dzemazuva ano. Nekudaro, fungidziro inosanganisira angangoita gumi mamwe maseru, rimwe nerimwe riine hunhu hwaro. Ehezve, pfungwa yakakosha mune zvese izvi kugona kwe - chaiko - chero chinhu chinofungidzirwa nemunyori.
Saizvozvo, kusavapo kwemiganhu yekugadzira kunovhura zvisikwa zvepasirese zvisikwa, zvisikwa zvengano, zvisikwa zvinonakidza, zvikara, fairies, elves, vatorwa, epakati-epakati masangano ... Asi, iyo "isina muganho" mhando ye fungidziro inoda zvakare nharo yekukakavara uye, pamusoro pezvose, shandisa zvinyorwa zvekunyora kuti ugadzire tsananguro dzakajeka.
Wongorora mafungidziro ekutanga uye zviwanikwa zvinoshandiswa nevanyori vakakura kuti vaise nyika yavanayo mundangariro papepa.
Gadzirira tsananguro dzakadzama dzevatambi vakuru uye vechipiri (zvisinei nekuti idzi tsananguro dzinozoratidzwa mune zvinyorwa zvebhuku). Izvi zvinosanganisira zvavo nyaya dzehupenyu, hunhu, zvipfeko, zvinokurudzira, uye zvavanotarisira.
Gadzira nguva yekudzivirira kusawirirana.
Tsanangura chinhu chimwe nechimwe chenyika yekufungidzira ichavakwa (nzanga, zvematongerwo enyika, zvinomera, mhuka, mhepo, jogirafi, nyeredzi) ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Pfungwa dzekunyora bhuku
Paco Gómez Escribano: «Vanyori venhau vanopara mhosva vanorarama kubva kunetsana kwevanhu»